ဘလက်ချော ပြောချင်တဲ့ Two Piece အကြောင်း…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဘလက်ချော ပြောချင်တဲ့ Two Piece အကြောင်း…။
ဘလက်ချော ပြောချင်တဲ့ Two Piece အကြောင်း…။
Posted by black chaw on Nov 8, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 26 comments
ယူချင်သလို…၊ ယူတတ်သလိုသာ ယူကြပေတော့ ကျောင်းဒကာတို့…။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကပဲ သာမာန် Torist Guide မလေး အဖြစ် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေခဲ့တဲ့
နန်းခင်ဇေယျာ ဆိုတဲ့ ၂၄ နှစ်အရွယ် ရှမ်းပအို့(၀်) မလေးတစ်ယောက် …
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ ကျွန်းပေါ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့
Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ
Miss Internet ဆုနဲ့ Miss People Choice ဆုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့
တိုင်းသိပြည်သိ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများစာရင်းထဲကို နေ့ချင်းညချင်း ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါရောလား ဗျာ…။
အောင်မယ်…သူလေးနဲ့ အင်တာဗျူးမယ်…ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် အခကြေးငွေပေးရမယ်ဆိုလား…
လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီရဲ့ Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရခြင်းနဲ့အတူ…
ဒါရိုက်တာစင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးမယ့် Alpine သောက်ရေသန့်ကြော်ငြာ…၊
Blue Mountain အချိုရည်ကြော်ငြာတို့မှာလည်း ၀င်ရောက်သရုပ်ဆောင်ပေးဦးမယ်လို့
နန်းခင်ဇေယျာလေးဟာ Two Piece (နှစ်နေရာတည်း လုံခြုံခြင်း) နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ…။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းအရလိုအပ်လို့ ၀တ်ရတယ်ဆိုတာကို…
မြန်မာပြည်သူတွေက နားလည်ပေးနိုင်ကြတာကိုလည်း မမျှော်လင့်ပဲ သိလိုက်ရတဲ့အတွက်…
နောက်နှစ်…နောက်နှစ်တွေမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် Miss Myanmar မလေးတွေအတွက်…
စိတ်ချလက်ချသာ Two Piece ကြပေတော့ သမီးလေးတို့ရေ…။
ဒီကလေးမလေး ဒီလောက်အထိနာမည်ကြီးသွားတာ Two Piece နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံကြောင့် ဖြစ်ရမယ်တဲ့…။
နန်းခင်ဇေယျာလေးရဲ့ Two Piece နဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို သေသေချာချာပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးတော့လားကွယ်…။
အဲဒီလောက်ကြီး Sexy ဖြစ်နေတာမျိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး…။
ပြစ်မှားချင်လောက်အောင်လည်း စွဲဆောင်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး…။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အေးချမ်းတဲ့ အတွေးကိုပဲ ပေးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ…။
ပြိုင်ရင် နိုင်မှ ကြိုက်တတ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပျင်းထန်လွန်းတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်လို့…
တချို့များ နေ့မအိပ်ညမအိပ် Vote ကြတဲ့လူတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်ဆိုလား…။
ကာယကံရှင် နန်းခင်ဇေယျာလေးကတောင် တောင်းပန်ယူရတဲ့အထိပါပဲတဲ့…။
နောက်တစ်နှစ်များ ဒီပြိုင်ပွဲကို ၀င်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့…
Miss Internet Award လောက်နဲ့ ကျေနပ်မနေကြပဲ…
Miss International ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…။
Miss Universe ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားကြပေါ့ကွယ်…။
အားပေးကြမယ့်သူတွေ အနေနဲ့လည်း Vote လုပ်ကြတာလည်း လုပ်ကြပေါ့ခင်ဗျာ…။
တစ်ဖက်ကလည်း Miss International ဖြစ်အောင် အားပေးကြပါလို့…
အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည် ခင်ဗျာ…။
မျက်ကန်းမျိုးချစ်လို့ ပြောချင်လည်း ပြောကြပါစေတော့…။
Miss International ဆုသည် Miss Myanmar များ အတွက်သာ ဖြစ်ရမည်…
ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေး နဲ့ဆို…
ရိုက်မယ့်ရိုက်တော့ ဇင်ယော်ရီးနဲ့ စရိုက်ပါလားကွယ်..
စိုးတယ် …စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိတော့တယ်ကွယ်…
အဲဒီ နန်းချင်ဇယာလေးက မြန်မာဝတ်စုံ.. တိုင်းရင်းသား ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဘဲပြိုင်ရရင်… နိုင် နိုင်တယ်…. အဲ… တူးပိစ် နဲ့ ပြိုင်ရတော့ အားနည်းချက်တွေ ပေါ်ကုန်ဒါပေါ့…
သူလိုငါလို ဘဝ တခုကနေ နေရာတနေရာ ရအောင် ဖောက်ထွက်နိုင်တယ်
ဆိုတာ ချီးကျူးစရာပါဘဲ။ စွမ်းနိုင်သူတဦး အနေနဲ့ လေးစားစရာပါ။
ပုံမှန်လည်ပါတ်နေရတဲ့ ဘဝတခုကနေ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတခုကို
ဖောက်ထွက်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဖောက်ထွက်ခွင့် နဲ့ ဖောက်ထွက်နိုင်စွမ်း
၂ ခု စလုံး ရှိဖို့လဲ လိုပါလားလို့ စဉ်းစားသွားမိစေပါတယ်။
သာမန် တိုးဂိုဒ် လုပ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ (ကျနော့အမြင်ပါ) သူ့ထက် လှပြီး၊စွဲဆောင်မှု ရှိသူတွေ
ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က သူ့လိုတော့ ဒီနေရာ ကို မရကြပါဘူး။
သာမန် နေ့စဉ်လူမူ့ဘဝ တွေမှာ ကျပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသူ
တွေ အတွက် ဒီလို “ဖောက်ထွက်ခွင့်” ဆိုတာ ရှိနိုင်မယ်၊ မရှိနိုင်ဘူး ၊ ရှိသော်လည်း စွမ်းနိုင်မယ်၊
မစွမ်းနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့လူ့ဘဝရဲ့ ဒဿန တခုကို လက်တွေ့ပြလိုက်သလိုပါဘဲ။
ကံ တရားက ဖောက်ထွက်ခွင့် ပေးလို့ပါလို့ ပြောရင်တောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ဆိုတာ သူ့အရည်အချင်းနဲ့
သူ့ကြိုးစားမှု လို့ ဆိုရမှာပါ။
ငါး ၃ ကောင် ပုံပြင်ထဲက ဉာဏ် ငါးလေး “ဉာဏ်သုံးပြီး”၊ လှေအစောင်း(ကံအကောင်းမှာ)၊
အားကုန် ခုန်ထွက် (ဝိရီယစိုက်)လိုက်လို့ တံငါလက်ကလွတ်တာမျိုး လေးနဲ့မြင်ကြည့်မိပါရဲ့။
ခင်ဗျားကဘာရယ်မဟုတ်ရေးလိုက်တော့ ကျနော်ကလဲ ဘာရယ်မဟုတ် တွေးလိုက်မိတာပါ။
Two Piece ၀တ်တာချင်းအတူတူသူက မြန်မာပြည်ကိုအိုးမဲသုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ
တချို့က Tow Piece ၀တ်ပြီး မြန်မာသိက္ခာချနေတာကို ………
လှတာ မလှတာထက် အရှိအတိုင်း ရိုးရိုးသားသား ချပြရဲတဲ့ ရိုးဂုဏ်လေးကြောင့် သူ့ကို လူတွေနားလည်ပေးကြတာလို့ထင်ပါတယ်…
2 piece မ၀တ်ပင်မဲ့ အရည်တရွှဲရွဲ စက်ဆီမျက်နှာကြီးဒွေနဲ့ လှချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ဟာတွေကတော့ ရွန်စရာပါအေ…
မစ္စအင်နာနေရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေအနေနဲ့ အတော်ကြီးကြိုးစားရဦးမှာပါ…
အကော်ဒယံအုန်းကျော်ကြီး လေလေးချွန်ပြီးဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကိုသတိရတယ်…
အရင်ဆုံး အာရှအဆင့်ကနေဖောက်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါဦးမည်… ပြီးမှကမ္ဘာအဆင့်ကိုမျှော်လင့်ပါ…
အတိုက်အခိုက်တွေကြားထဲက ဖောက်ထွက်ခဲ့တဲ့သူမို့ လေးစားပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ… အနိုင်ကိုပဲလိုချင်နေတဲ့ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်စေချင်ပါတယ်…
ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ… ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာကိုသိရင်ကျေနပ်ပါပြီ…
ကမ္ဘာဖလားမှာ အီတလီရှုံးတော့ ဂရုဏာသက်ပြီးမျက်ရည်ကျချင်ကြပါမယ်…
သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ရေသန့်ဘူးတို့ အုတ်နီခဲတို့နဲ့ပေါက်ပြီးနိုင်လာတဲ့ မြန်မာအသင်းကိုတော့ ဂုဏ်မယူချင်ပါ…
လောင်းရဲတယ် ပေါင်တုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ဗမာမယ် မနိုင်စေရဘူးလို့…
ဖိုင်နယ်လစ် စာရင်းမထွက်ခင် ကိုဖုန်းကျော်ကြီး ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးတင်တာ
ဟုတ်ပါတယ်… သူများတွေက power aerobic တွေ ဘာတွေ ဆော့ထားကြတာပါ…
အားကစားသမားတယောက်လို ကျစ်လစ်ပေမယ့် ဖွံ့သင့်တဲ့နေရာတွေ ဖွံ့ကြပါတယ်..
ကိုယ်တွေက သာမာန် ခပ်ပိန်ပိန် မိန်းကလေး တယောက် ဆိုတာထက် မပိုပါဘူး..
တူးပိစ်လေးလည်း ၀တ်လိုက်ရော ..
ပတ္တလား တီးလို့ရတဲ့ နံရိုးလေးတွေရယ်..
အဆီ မဆိုသလောက်လေး စုနေတဲ့ ပေါင်တံလေးတွေရယ်…
မာဆယ်လုံးဝ မရှိတဲ့ ဘီနဲ့ ဂျီလေးတွေရယ်..
p.s ကိုယ့်လူမျိုး နိုင်စေချင်လို့သာ ဗုတ်လိုက်ပါတယ်..
မဲ့ခွက်ခွက်လေး မို့ … အားမရပါကြောင်း..
အခုပဲ မဒမ်ချော လှမ်းပြောပါတယ်
ရှင့် ကိုချောကြီး ကို မေးလိုက်စမ်းပါ တဲ့ နန်းခင်လေး တူးပိစ် ၀တ်တာ ကို
အဲဒီလောက်ကြီး Sexy ဖြစ်နေတာမျိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး…
ပြစ်မှားချင်လောက်အောင်လည်း စွဲဆောင်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး……
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အေးချမ်းတဲ့ အတွေးကိုပဲ ပေးခဲ့ပါတယ် တဲ့ ……. ဟင်း ဟင်း
ကျွန်မ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် စနေ က သူ နဲ့ ဈေးသွားတော့ ၀တ်ခဲ့တဲ့ ၀တ်စုံ လေးက ဘာ အရောင်၊ ဘယ်လို ပုံစံ ဆိုတာရော မှတ်မိသေးလား မေးကြည့်ပါဦးတဲ့
အင်း ကိုချော အိမ် မပြန်ခင် သေချာအောင် စဉ်းစားသွားဦး ဗျ
တစ်ယောက်တည်း အိမ်ပြန်လို့ ရော ဖြစ်ရဲ့လား ဗျာ
ဥပုဿ်စောင့် သီလမယူပဲ တူးပိစ်လုပ်နေတဲ့ ကျောင်းဒဂါတော့ ငြုတ်ကျည်ပွေ့ စာ မိတော့မယ်ဟေ့….
Miss Myanmar များသည် အူးဗိုက်အတွက်ဖြစ်သည်
အဆိုပါ ဆောင်ပုဒ်ကို ပြင်ဆင်သူများ သဂျီးရဲ့ သုံးလုံးပြူးနဲ့ တွေ့ မည်မှတ်ပါ။
ခု တစ်ယောက် …
နောက် အနှစ် ၂၀ ဆိုရင် အယောက် ၂၀ …
နင်က … နိုင်လို့လား …
(ဘီအီးပုလင်း ပြောပါဒယ် …)
မောင်ဗိုက် သူကြီး2လုံးပြူးက သူကြီးဆီမှာမရှိတော့ဘူး
ဒီလို အဆိုပြုပေးလို့ သာဒု
ဘာဆိုဘာမှ မကျောချင်တော့ပါ…သို့သော် လေးဘလက်ပြောသလိုလေးတော့ မြန်မာမလေးတွေ ဖြစ်စေချင်မိပါတယ်။
ပြောရရင်.. မစ်စ်အင်တာနေရှင်နယ်က. သိပ်နာမယ်မကြီးပါဘူး..
မစ်ယူနီဗာ့စ်နဲ့.. မစ်စ်ဝါ့လ်ဒ် ရှေ့မှာရှိပြီး.. အဲဒါတွေကို ၀င်ပြိုင်အနိုင်ရအောင်…ကြိုးစားသင့်ပါကြောင်း..
Miss Universe is an annual international beauty contest that is run by the Miss Universe Organization. The contest was founded in 1952 by California clothing company Pacific Mills. The pageant became part of Kayser-Roth and then Gulf+Western Industries, before being acquired by Donald Trump in 1996.
ကဘချော တို့ကတော့ ညီမချော က နဲနဲ လေး လွှတ်ပေးလိုက်တာ နဲ့ ပြောလို့ ကို မပြီး တော့ဘူး။
(စီအာ – ဒေါ်မြလေး)
@ အင်္ဂါZ :
ပထမဆုံးပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ
အင်ဂါ Z ကြီးရေ…။
သင်္ချာလေးကို Two Piece လေးနဲ့ မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
စိုးတယ် …စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိတော့တယ်ကွယ်…။
@ Mon Kit :
ပထမဆုံး Two Piece စွန့်စားခန်းကို…
ပို့စ်လည်းတင်ချင်တယ်…၊ ရေးဖို့အချိန်ကလည်း ရှားနေတယ်…၊
အခုလို လေးနက်တဲ့ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးပါကိုသစ်ရေ…။
@ jullies cezer :
ဟုတ်တာပေါ့ jullies cezer ရေ…။
ခင်ဗျားပြောတာ ကျွန်တော်လည်း သဘောတူပါတယ်…
ရိုးဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်လည်း တွေးမိပါတယ် Wow ရေ…။
အဲဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ ဗျာ…။
မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကြီးကို
လို့ ရေးလိုက်တာပါ ဗျာ…။
အဲဒီလို ပျော်စရာကွန်းမန့်လေးတွေ ဖတ်ချင်လို့ပါဗျာ…။
ကိုနိုကြီးရေးတဲ့ ကွန်းမန့် ဖတ်လိုက်ရလို့…
အဲဒီလိုတွေးတတ်တာကိုက စိန်ဗိုက်ဗိုက် ရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်တော့သတည်း…။
@ အံစာတုံး :
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ကြီးရေ…။
@ အာဂ :
မြန်မာမလေးတွေ ဖလန်းဖလန်းထပြီး Miss International ဆုတွေရော…၊
Miss Universe ဆုတွေရော…၊
သူကြီးပြောတဲ့… Miss World ဆုတွေရော ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ နေ့ကို
မြန်မာမလေးတွေ Two Piece ၀တ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်တာကို
ပြသနာတစ်ခုလို့ မမြင်ကြတော့ ဘူးခင်ဗျ…။
Miss Universe ကျတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့
Miss World ကိုတော့ မသိသေးဘူးခင်ဗျ…။
မဒမ်ချော က ကျွန်တော်ရေးတာဖတ်ပြီး
အဲဒါကြောင့်မရေးချင်ပဲနဲ့ ရေးနေရတာပါ ခင်ဗျာ…
ဒီပိုစ်လေးထဲမှာ သူနဲ့ပါတ်သက်တာလေးတော့ ၀င်ပွားချင်ပါသေးတယ်။
အခုသူရသွားတဲ့ဆုလေးအတွက် ကျနော်တို့လို အင်တာနက်သုံးသူများက
အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ၀င်ပြီး ၀ိုင်း ဗုတ်လိုက်ကြတာပါ။
် နှစ်ငါးဆယ်လောက် ၀င်မပြိုင်နိုင်တာကနေ ပထမဆုံးဝင်ပြိုင်သူမို့လဲ
သူရယ်လို့နာမယ်စွဲကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဗုတ်လိုက်တာကတော့အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။
နောင် လဲဒီလိုဝင်ပြိုင်သူမှန်သမျှကို အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ၀င်အားပေးနေကြမှာလဲ အမှန်ပါဘဲ။
ကြိုးစားပြီး ၀င်ပြိုင်သူကိုလဲ လေးစားတာပါ၏။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဘို့ပြောတာ အနုပညာကြေး တောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါသေးတယ်။
ဘာကြောင့် ဘယ်သူကြောင့် ဖြစ်လာလာ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကို သူကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့ရတာပါ။
အဲတော့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ရလာဒ်ကိုတော့ ခံစားချင်မှာ ခံစားခွင့်ရှိတာအသေအချာပါဘဲ။
သို့သော် စီးပွားရေး သက်သက်မကြည့်ဘဲ လူမူ့ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင် တော့
စေတနာရှေ့ထားပြီး လုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ ပွားလိုက်မိပါ၏
ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးဗျာ။ သူလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့စုံပွဲသတင်း
ညီမကို အပင်ပန်းခံပြီး အားပေးပံ့ပိုးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ ညီမ ဆုံတွေ့ကြမယ့် ပွဲလေးရဲ့ အစီအစဉ်(အကြမ်း)လေးကို ညီမဖော်ပြထားလိုက်ပါတယ်။
နေ့ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
အချိန် ညနေ ၄ နာရီ မှ ၇ နာရီအထိ။
၁။ Photo Section အစီအစဉ်။
၃။ နန်းခင်ဇေယျာမှ ခရီးစဉ်အတွင်း ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံ၊ ပရိတ်သတ်များရဲ့ ပံ့ပိုးမှုများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။
၅။ Celebrity Interview အစီအစဉ်။
၆။ RedLink မှ Brand Ambassador ပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်။
၇။ တက်ရောက်လာကြသော ပရိတ်သတ်များထဲမှ ၁၀ ဦးအား RedLink Broadband WiMAX (Silver Plan) စက်နှင့် တစ်နှစ်သုံးစွဲခွင့်အား နန်းခင်ဇေယျာမှ Lucky Draw ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်။
၉။ ပရိတ်သတ်များ၏ ဆန္ဒပြုခြင်း။
၁၀။ RedLink ၏ Family Photo ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် နန်းခင်ဇေယျာမှ ပရိတ်သတ်များအား လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်။
ညီမအနေနဲ့ ညီမရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကို ပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်။ တက်ရောက်ချင်တဲ့လူဦးရေ အရမ်းများရင်တော့ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီးဖိတ်ကြားရမှာဖြစ်လို့ ဒီပွဲလေးကို တက်ရောက်လိုတဲ့ ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့ ညီမရဲ့ အီးမေးလ် ကို နာမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့ကို ပေးပို့ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင့်…..
(ပရိတ်သတ်အတွက် မေတ္တာလက်မှတ်များသာထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး လက်မှတ်လုံးဝ မရောင်းပါ)
ပေါက်ကရတွေ သိပ်မရေးကြနဲ့ ဗျာ
ကြမ်းကြားလေကြား ကြားသွားလို့ 
အကုန်ငတ်ကုန်မယ်၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ်
မျှော်စင်ကျွန်းမှာလည်း တူးပိစ် ပဲလားဟင်?
ကိုနက်ချော နဲ့ ဘော်ဒါအပေါင်း
ကျန်းမာ ချမ်းသာ လိုအင်ဟူသမျှ ပြည့်ကြပါစေဗျာ
မိချောင်းတွေထဲ ပစ်ချတာကမှ အရိုးကျန်အုံးမယ်ထင်တာဘဲနော်
ကျွန်တော်လည်းအခုဘဲ ပိုစ် တင်လိုက်မိတယ် ။လေးပေါက်ရေ ..လှုမှုရေးလဲ လုပ်နေပါတယ်တဲ့ ။
နန်းခင်ဇေယျာ ဖေ့စ်ဘုတ်က ပါ ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်… နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့(တနင်္ဂနွေ) မှာ ညီမနဲ့ အတူ လှည်းကူးမြို့နယ် မှာ တည်ရှိတဲ့ မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ ခရီးစဉ်အပါအ၀င် အခြားပရဟိတလုပ်ငန်းများမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင် လှူဒါန်းလိုသူများ အနေနဲ့ အောက်ပါ ဖုံးနံပတ်များကို ဆက်သွယ်ပြီးလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှ အလှူရှင်များအနေနဲ့ လာရောက်လှူဒါန်းရန်ခက်ခဲသူများကို လိုက်လံကောက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားမြို့များမှ လှူဒါန်းလိုသူများ၊ နိုင်ငြံ
ခားမှလှူဒါန်းလိုသူများအတွက်လည်း အောက်ပါဖုံးနံပတ်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ ခရီးစဉ်အတွက် လှူဒါန်းလိုသူများဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်
၀၉၅၁၁၇၆၉၁၊ ၀၉၄၃၀၉၇၆၈၄၊ ၀၉၅၄၁၃၇၁၇၊ ၀၉၄၂၁၁၁၈၈၀၀။
မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ ခရီးစဉ်အတွက်အလှူငွေနဲ့ လှူဒါန်းမည့်ပစ္စ္စည်းများကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးကောက်ခံသွားမှာပါ။ လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေများကိုလည်း ညီမရဲ့ Facebook Account နဲ့ Fan Page များကြေငြာပေးသွားပါမယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မနက် ၉ နာရီခွဲတိတိမှာ ရန်ကုန်မြို့ဆုံရပ်ကနေ(ဆုံရပ် နေရာကို ပြန်လည်ကြေငြာပေးပါ့မယ်) စတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုံမလည်း သူ တူးပိစ်ဝတ်တာကို ဘယ်လိုမှမနေဘူး..မျက်နှာကလည်း sexy ဖြစ်မနေလို့ဖြစ်မယ်…ဒါပေမယ့် မြန်မာအချိုးအစားဖြစ်နေတော့ လှတော့ မလှဘူးပေါ့နော်…
ဆိုတော့ကာ… ဒီလိုမျိုး ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ တူးပိစ်ဝတ်ပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာကိုယ်စားပြုပြိုင်ခဲ့တဲ့ Miss Myanmar အတွက်တော့ မုဒိတာပွားပြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့…